के छ हजुर ? एनआरएनए सदस्य बन्नुभयो हजुर ? बन्नुस् है, हजुर – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
के छ हजुर ? एनआरएनए सदस्य बन्नुभयो हजुर ? बन्नुस् है, हजुर
प्रकाशित: २०७७ माघ १९ गते २३:१३
सचिन परियारको प्यारो शब्द ‘के छ हजुर, ठीक छ हजुर’ अहिले सबैभन्दा चर्चित छ । महानायकदेखी खलनायक, गायकदेखी धावक अनि पत्रकारदेखी साहित्यकार सबैको मुखमा छ, के छ हजुर ! सामाजिक सन्जालमा उनको लोकप्रियताको त के कुरा गर्नु ? माताले छाडेकी, दु:खमा हुर्किएका सचिनको ममतामयी सम्बोधन त्यसै भाईरल भएको होईन । सचिनको बोलीको मधुर्यता, निर्दोष चेहेरा र बालापन । न नाटक, न चाकरी । बालबालिकाको बोलीमा कती सत्यता लुकेको हुन्छ भन्ने उपमा, के छ हजुर !
के छ हजुर ?
कोरोनाको महामारीले थिलथिलो विश्वमा स्व-स्वास्थ्यको प्रयास र कामनाले झन्डै एक बर्ष कटायो । राम्रै काम भएकाहरुलाई त फाईदै भयो तर पसिना चुहाउनै पर्नेहरुलाई त बांच्न हम्मे हम्मे छ । ‘अमेरिकाको सरकारले सबैलाई पालेको छ, स्टामिनादेखी स्टिमुलस पा’का छन’ भन्ने नेपालतिरहरुका सोचमा सत्यता कहाँ छ र ? यत्ती हो, अमेरिकामा भोको मरिदैंन, न भोकले कसैको ज्यान गएको समाचार छ ! कोरोनाको कहर, परिवार छोडी काममा जन कसलाई छ र रहर भन्ने लेख्ने भन्दाभन्दै बर्ष बित्यो, र पनि यो महामारीको पिडा कम भाको छैन । जाडो छेक्न दुईटा सुरुवाल लगाएर जोत्न हिंडेजस्तै कोरोना छेक्न दुई दुईटा मास्क लगाएर जीवन धान्ने कर्तव्यमा सबै लागिपरेकाइ छन । भनिन्छ नि, पहिले आफ्नो स्वास्थ्य, परिवार अनि समाज ।
राजनीति र दुवातिर्की त बहुत दुर के बात ।
परिस्थितीले सामाजिक कार्यक्रममा बाहिर नल्याएको हाम्रो भौतिक ज्यान आफन्त, मित्र एवम शुभेच्छुकहरुको स्वास्थ्य पुकारामा त व्यस्त छ नै । जूममा धेरैहरुको कार्यक्रम र अनुहार त हेर्न पाईएकै छ । कोरोनाको कहरले जूमका मालिक धनी त्यसै बनेका छन र । हाम्रा दशैं काटेपनि सामाजिक सन्जालहरुको त दिपावली नै गराइदियो नि, कोरोनाले । जे होस्, सबै जना सञ्चै हुनुहोला ! ठीकै त होला र पनि मनले खाएकाहरुलाई तार ठोकिन्छ र सोधिन्छ, के छ हजुर ?
अमेरिकाको जाडोमा बढेको गर्मी
लस एन्जलसमा पशुपतिनाथ बुद्ध मन्दिरको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।अनलाईनमार्फत मतदान गरेर लसएन्जलसवासीले गौरवशाली मन्दिर चलाउनयहां अहिले नयां समिति आएको छ । एएनएको नयां कार्यसमिति आएकौ छ । कोरोना कहरले गर्दा सबैजना जम्काभेटहुने ठाऊं एनआरएनएको साधारण सभा अनलाईन मार्फत सम्पन्न गरेर कमसेकम एनआरएनले जिम्मेवारी पुरा गर्यो । कोरोनाकै कारणले गत जुनमान्यूयोर्कमा तय गरिएर पनि सम्पन्न हुनुपर्ने नेजाको बार्षिक सभा हुन सकेको छैन। तर कोरोना, अमेरिकाको जाडोसंगै अमेरिकी नेपाली सामुदायिक संस्थाहरुकोसाधारण सभा वा निर्वाचन हुनका लागि सरगर्मी भने बढेको छ ।
प्रवासी नेपालीहरुको छाता संगठन एनआरएनए अमेरिकाको दुई बर्षे कार्यकालले नेटो काट्ने बेला हुंदैछ । नयां नेतृत्व चयन गर्ने यो सरगर्मीले ‘सदस्य बनाउन’ अभियान्ताहरु, पदाधिकारीहरु, उम्मेद्वारका आकांक्षीहरु वा सदस्य बनाउन ठेक्का पाएका ठेकेदारहरु ‘सदस्य बनाउनहिडेका’ फेसबुके ट्यागहरु छरपष्ट छन् । अब छरपष्टे प्रचार अझै बढी आउने क्रम जारी छ । यति भनौं, हिजो दुला पसेकाहरु अजिगंर बनेर नमस्कार गरेका ब्यानरहरुले जुकरवर्गको घरका सबै भित्ताहरु रंगीन हु्दैछन् ।
हजुर सदस्य बन्नुभो हजुर ?
पंक्तिकारले बहुतै सम्मान गर्ने अग्रज हरिहर दाहालले लेख्नुभएको थियो, ‘भोटहाल्न मात्र होईन हजुर, तपाईहरुको आवाज बोल्नसक्ने पात्रलाई प्रतिनिधी चुन्नपनि सदस्य बन्नुस् ।’ हो, पात्रहरु जस्ता छन् वा हुनेछन्, ती निर्वाचित हुन् र निर्वाचनबाटै आउनेहुन् । सबैका बिषमता र आरोपहरुका छिनोफानो पनि निर्वाचनलेगर्दछ, जुनसुकै संस्था किन नहोस् ।
नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त संस्था वा तिनका प्रतिनिधीहरुले जनआवाजका काम गर्दैनन् भने ‘आलीको डिलमा राखेर लात्ताले हान्ने’ उपाय नै निर्वाचन हो । जुनसुकै संस्थामा पनि पात्र जस्ता भएपनि संस्था कहिल्यै खराब हु्दैन । ज्ञानेन्द्रलाई दांजेर पृथ्वीनारायण शाहकोयोगदान भुलिन्छ र ? त्यसो त संस्था चलाउने बिधी सिकाउन, जनआवाजको प्रतिनिधी चुन्न, काम गर्न सक्ने वा धेरैलाई मन परेकालाईखलोमा मुली बनाएर राख्न र अल्छीलाई आलीबाट हुत्याउने उपाय नै निर्वाचन हो । त्यो केवल तपाईं हामी सदस्य बनेर मात्र सम्भव छ ।
बन्नुस् है हजुर !
एकजमानामा सबैभन्दा ठुलो एनसिसी एनआरएनए, अमेरिका पछि दोस्रो भयो । अब कुन दर्जा पाउंछ, त्यो तपाईं हामी बन्ने सदस्यसंख्याले निर्धारण गर्दछ । हिजो ठुलो बनेको हामीहरु सदस्य बनेर हो भने सानो बनेको चाहीं हामीहरु सदस्य नबनेर ।
हामी सदस्य बन्दा ठुलो हुने संस्था, एनआरएनए–अमेरिका, हामी सदस्य नबन्दा खुम्चिन्छ । त्यती शक्तिशाली छौं, हामी । त्यसैले सदस्यबनौं, हजुर । हो, २० डलर धेरै हो, तर एकछाक कम खाएर सदस्य बनेको संस्थामा तपाईं हामीले मुली बनाउने खलोमा समस्याहरुकोदाईं गर्न सकिन्छ । अनि पो हाम्रो आवाजको धान निस्कन्छ । अनि पो मित्रताकको टौवा बन्छ अनि, अनि पो टौवाको टुप्पोमा एकताकोलालुपाते रंगाउन पाईन्छ ।अबको दुई साताभित्र सदस्य बनुम्, हजुर । पहिला सदस्य बनौं हजुर ।
कृष्णलिलालाई अर्जुनदृष्टी लगाएर बु्द्धी र विवेकको प्रयोग पछि गर्दै गरुम्ला । एनआरएनए अमेरिकाको सदस्य चाहीं बन्नुस् है, हजुर ।